Izindlela Ezine Zokuxhumana Ezinhle Kakhulu Zokuqalisa Kobuchwepheshe » Martech Zone
Imikhuba Emine Yokuxhumana Engcono Kakhulu Yokuqaliswa Kwezobuchwepheshe
NgoLwesine, Januwari 6, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 29, 2014 U-Adam Encane
Ukufaka okumbalwa kwangaphakathi nangaphandle imikhuba emihle yokuxhumana kuzohlinzeka ngesisekelo esiqinile sokukhula kwesikhathi esizayo.
Bona ukubaluleka kobudlelwano bomphakathi - Izwi lomlomo ne-tweeting kuveza inzalo futhi kuyingxenye ebaluleke kakhulu ekushumayeleni abathengi bezobuchwepheshe banamuhla. Kepha uhlelo lwendabuko lwe-PR lunokufinyelela kubahlaziyi nabahleli abanezethameli zabafundi ezilungele futhi ezithembekile. Lapho umhleli tweets noma ebhala i-athikili enkampanini yakho, kungahle kube nezinkulungwane ezingamashumi ezinkulungwane ezizoyibuka. Abahlaziyi bezimboni nabahleli nabo banedumela lokuba ngochwepheshe bezinhloso. Ukuqinisekiswa okuvela eceleni kwesixazululo sakho kuthwala isisindo esikhulu kunokuzivumela ngokwakho. Bandakanya iseluleko sabezindaba esinolwazi emkhakheni womkhiqizo wakho. Sebenzisa ulwazi lwabo bese waziswa kochwepheshe abamboza imikhiqizo efana neyakho. Kuthonya laba bathonya ngezibuyekezo ekuthambekeni kwemakethe, ubuchwepheshe obusha kanye nemiyalezo ephathelene nezindlela zemboni. Lwela ukwakha ubudlelwano besikhathi eside nabezindaba bese uthola ukuqonda kwalokho abakudingayo ukukhiqiza okuqukethwe okushicilelwe.
Hlola umyalezo wakho wezinkampani ngokubheka imibono yangaphandle kanye nocwaningo - Ungakwenzi phuza i-koolaid futhi wamukele ngokungaboni umbono wabaphathi bakho ngomhlaba. Ukwamukela ukukhuluma kwangaphakathi okuthembisa ukuthi umkhiqizo wakho ube "ngowokuqala, ohlukile, ongcono kakhulu, namakhasimende akleliselwe ukuthenga" cishe ngeke kufane neqiniso futhi kufanele kuhlolwe. Yize umthamo ophilile wethemba uyikho okumakethwayo, ungakunaki okunye okwenzekayo emakethe. Thembeka. Uma ungeyena owokuqala futhi ohamba phambili - ungakwakhi lokho ku-pitch yakho yegolide. (Futhi nesixwayiso: Qaphela ukuthi ungasebenzisi ama-akhronimi nama-buzzwords amaningi kakhulu.) Beka umkhawulo kokuphakeme - ngaphakathi nangaphandle. Bulletproof imiyalezo yakho nabahlaziyi bemboni kanye nochwepheshe abajwayelene nomncintiswano wakho kanye nemakethe odlala kuyo. Umkhiqizo ngamunye noma insizakalo ethile incintisana nohlobo oluthile- inkampani ayinakuba ngumholi esigabeni esisodwa. Inselelo yokuphatha ukukhiqiza amaqiniso, ucwaningo kanye nokuqagela ukusekela ukusebenza komgwaqo womkhiqizo. Inhloso ejwayelekile ukuthi inkampani iphumelele.
Khuthaza ukuxhumana phakathi kwamaqembu ezobuchwepheshe namabhizinisi enhlanganweni yakho - Izinsizakusebenza ekuqaleni ziyelula kepha gwema isilingo sokuhlukanisa iqembu lakho lokuthuthukiswa komkhiqizo kubantu (imvamisa ukuthengisa nokumaketha) abakhuluma namakhasimende akho esikhathi esizayo. Abathuthukisi bezobuchwepheshe kwesinye isikhathi bangena ekwakheni ubuchwepheshe "obupholile" ngaphandle kokuqinisekisa ukuthi i-gizmo yakamuva yinto umuntu angafuna ukuyikhokhela. Ochwepheshe bezobuchwepheshe abathuthukisa imikhiqizo esikhaleni ngaphandle kokugxila kuzidingo zamakethe namathuba kungenzeka bakhiqize umkhiqizo ongeke uyethule inkampani njengoba kulindelwe. Khuthaza impendulo evela ekuthengiseni nasekumaketheni eqenjini lentuthuko futhi ubheke izitayela zemboni ukuvumelanisa umgwaqo womgwaqo nezidingo zesikhathi esizayo.
Hlomisela abasebenzi ngamathuluzi afanele adingekayo ukuxhumana ngempumelelo esikhathini sobuchwepheshe - Ukuxhumana okusebenzayo kudinga okungaphezu kwefoni ephathekayo ne-akhawunti ye-imeyili. Izinkampani kufanele zisethe izinqubomgomo namazinga emihlangano ye-elekthronikhi, imiyalezo esheshayo kanye nolayini benkomfa. Ukuhlomisa abasebenzi nge-software ne-hardware edingekayo ekuxhumaneni okungenamthungo kugcina abasebenzi behambelana futhi bekhiqiza. Ukusetshenziswa kwephakheji yesoftware yomhlangano we-elektroniki (ephelele ngolwazi lokungena ngemvume) kudinga ukutholakala kubo bonke abahlela imihlangano. Olayini benkomfa namaphasiwedi abo ahambisanayo kumele aziwe futhi aqukethe imigqa yasendaweni eya emazweni afakwa njalo. Okokugcina kodwa kudingeka ukuthi kube nendawo yokugcina izinto yedijithali lapho abasebenzi bangathumela khona ukuxhumana kwangaphakathi okufana nezinkomba zezinkampani ezibandakanya izindlela zokuxhumana ezivela eceleni nezinombolo zeselula. Setha amazinga nemihlahlandlela yokuxhumana kwangaphakathi nangaphandle. Kudinga ukuthi izingcingo zibuyiswe futhi kuphendulwe nama-imeyili njengengxenye yenqubomgomo efanele.
Ukungeza le mikhuba emihle yokuxhumana ekuqaleni kwakho kobuchwepheshe kuzosiza ukuqinisekisa impumelelo njengoba iqembu lakho likhula futhi libhekene nezinselelo zokuhambisa imibono emisha nemikhiqizo emakethe.
Ingabe Uwuhlolile Umkhankaso Wakho Wamuva?
Jan 7, 2011 ku-3: 02 AM
Okuthunyelwe okuhle, Joy! Siyabonga kakhulu ngokujoyina nathi. Abanye abantu bezindaba abasha bawathatha kancane amandla obudlelwano bomphakathi kepha sikubonile kusebenza namakhasimende ethu!